यी ११ सपनाले मानिसको मृत्युको संकेत गर ! जानी राखौ
राति सुतेको बेला हरेक मान्छेले सपना देख्ने गर्छ । भने सपनाले जीवनमा घट्ने अनेकौ घटना वा कुराको संकेत गर्दछ । कतिपय व्यक्तिको सपना पुग्ने पनि गर्छ । कसै-कसैले देखेको सपनाको ठिक विपरित पनि हुन जान्छ । सपनाले मानिसको मृत्युबारे पनि अगाडी नै संकेत गर्दछ । धेरै मानिसहरुको भनाइमा, कोही नजिकका,
२ छोरी र श्रीमतीलाई छाडेर मलेसिया गएका महराकाे अचानक मृत्यु ! शोकमा परिवार
रोल्पा नगरपालिका वडा नं २ का यमबहादुर महरा वैदेशिक रोजगारीमा गएको केही महिनामै निधन भयो । बीस वर्र्षको कलिलो उमेरमा तीन र एक वर्षका दुई छोरी र श्रीमतीलाई छाडेर रोजगारीका लागि मलेसिया गएका महराको विदेशमा अचानक निधन भयो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण ऋण काढेर मलेसिया पुगेका महराको
नेपाली झण्डा जलाइएको भिडियो युट्युवमा, कारबाहीको माग
नेपालको राष्ट्रियता एवंं जातीय सद्भावविरुद्ध घृणा फैलाउने गरी आपत्तिजनक शब्दहरुले भरिएको एउटा गीत युट्युवमा आएलगत्तै आलोचित बनेको छ । यो गीतलाई प्रतिबन्धित गरी यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले माग गरेका छन् । ‘देशद्रोही’ शीर्षकको उक्त गीत ‘मंगोल हप अफिसियल’ नामक च्यानलबाट सोमबार अपलोड भएको हो । गीतका
आज पनि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ ! तोलामा कति हेर्नुहोस ?
सुनको भाउ पुनः तोलामै एक लाख नाघेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला दुई हजार दुई सय रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ एक लाख चार सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार छापावल सुनको कारोबार प्रतितोला मूल्य ९८ हजार दुई सय रुपैयाँ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बेवास्ता नगर्नुहोला !
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक
सरकारले भदौ १५ गते सम्म यस्ता यस्ता सेवाहरु बन्द रहनेछन जानी राखौ
सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्ने व्यवसाय अटो वर्कसपहरु भदौ १५ गतेसम्म बन्द हुने भएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको अवस्थामा अटो वर्कसपहरु पनि असुरक्षित देखिएको भन्दै नेपाल अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघले सोमबारदेखि भदौ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ । संघले सोमबार एक अपिल प्रकाशित गरी एम्बुलेन्स, अस्पताल र
दुखद खबर : बरिष्ठ अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारीको निधन !
नेपाली चलचित्रकी सफल कलाकार सुभद्रा अधिकारीको निधन भएको छ । उनको आफ्नै निवास डल्लुमा निधन भएको हो । उनी, केही समयदेखि निमोनिया रोगबाट ग्रसित थिइन् । उनको ७२ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उनको पशुपति आर्यघाटमा दाहासंकार गरिएको छ । पशुपति आर्यघाटमा रहेको विद्युतिय शव गृहमा उनको दाहासंकार गरियो
दुखद खबर : आज थप १ कोरोना संक्रमितको अस्पतालमा मृत्यु !
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । गत साउन २० गतेदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ६० वर्षीय पुरुषको निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ । मृतककाे स्थायी घर काठमाडौं रहेको र आइतबार अपराह्न निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं
४६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पीसीआर टेष्ट ५ लाख नाघ्यो !
पछिल्लो २४ घण्टामा ४६८ जनामा कोरोना भाइरस -कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमितको संख्या २६ हजार १९ पुगेको छ । उनीहरुमध्ये १०२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ हजार २०१ जना निको भएका छन् । कहाँ कति थपिए ? पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ९८ जना
कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ, उपत्यकामा अनुगमन तीव्र पारियो
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को सङ्क्रम रोक्न सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ । सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले मातहत सुरक्षा निकाय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जरुरी सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समयमा